I-MIDMOST Boutique BR9 - 5min ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Ninh Kieu Quay - I-Airbnb
I-MIDMOST Boutique BR9 - 5min ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Ninh Kieu Quay
Ikamelo e-ihostela ibungazwe ngu-Thu
Njengoba siyiqambe, i-MIDMOST Boutique itholakala e-avenue eyingqayizivele, emaphakathi nedolobha, futhi ingxenye yayo endala, engama-400m nje ukuya e-Ninh Kieu Quay (pier to floating market) futhi cishe yonke into isingaphakathi. ibanga lokuhamba. I-MIDMOST ibhekene nenxanxathela yezitolo i-Sense City (isitolo esikhulu se-coopmart, izinkundla zokudla, izindawo zokudlela...), 200m ukuya emgwaqweni wokudla lapho ungajabulela khona ukudla kwesintu okuningi usuku lonke, kanye namamitha angu-50 ukuya eCoffee House, Highlands Coffee, Vietcombank, BIDV ibhange...)
I-MIDMOST Boutique iwuhlobo lokuhlala lwesimanje olunomhlobiso we-boutique.
Lena ingxenye endala yedolobha laseCantho. Omakhelwane baminyene kodwa bakushiya ubumfihlo, ikakhulukazi banobungane kakhulu futhi bakhethekile. Uzothola ulwazi lwangempela lokuthi abantu bendawo bangaphila kanjani uma behlala lapha.
- Sihlala sitholakala edeskini lokwamukela izivakashi ukuze sisekele ulwazi lwakho lokuhlala nokuvakasha.
- Sinemephu yabavakashi yamahhala yedolobha laseCan Tho lezindawo ongavakashela kuzo futhi ujabulele amakhono.
- Siphinde sinikele ngokuvakasha ezimakethe ezintantayo kanye nesiqhingi sase-Con Son (indawo yasemaphandleni yangempela e-Cantho, indawo entsha okufanele uyihambe kubahambi), kanye nesidlo sakusihlwa ku-yacht eduze kwe-quay.
- Siphinde sisize ekubhukheni amathikithi ebhasi (kunendlela yokuthutha yamahhala esuka lapha eya esiteshini samabhasi) nokuqasha izithuthuthu, izimoto.
- Sinemephu yabavakashi yamahhala yedolobha laseCan Tho lezindawo ong…